Dardar Geliyaha Ganacsiga | Bob Prosen
Bob Prosen Wuxuu Daahfuray Xawaareynta Ganacsiga Yaryar
Isniin, Janaayo 24, 2011 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waan aqriyay oo si fiican ayaan ugu riyaaqay Aragtida dhunkashada Nabadeey, waa buug ka yimid Bob Prosen oo bixiya talooyin wanaagsan oo ku wajahan ganacsiyada. Bob hogaaminta ganacsiga iyo barnaamijyada tababarka maaraynta ayaa si weyn u kordhiyay waxqabadka iyo faa'iidada waxayna badaleen dhaqanka Saber, Hitachi, Sprint, AT&T iyo boqolaal ganacsi oo yaryar oo wadanka oo dhan ah.
La-talinta iyo tababbarka Bob ayaa hadda baahi weyn loo qabaa - waa kan qaybtii ugu dambeysay ee MSNBC:
Qof kastaa wuxuu had iyo jeer weydiiyaa sida ugu dhakhsaha badan ee loo kordhiyo waxqabadka iyo faa'iidada ganacsigooda. Waxay umuuqataa in qof kastaa doonayo inuu ogaado istaraatijiyadaha saxda ah ee ay u baahan tahay si loo kobciyo iibkaaga, loo yareeyo wareejinta shaqaalaha loona kordhiyo faa'iidadaada iyadoo aan loo eegin xaaladaha dhaqaale. Waxaan geeyay inta badan talooyinka uu Bob bixiyay tan iyo markii aan bilaabay ganacsigeyga ganacsiguna wuu kobcayaa.
Bob iyo anigu waan xiriirinay midba midka kale wuuna gaadhay inuu dhiirrigeliyo taxanahan tababarka gaarka ah (Wuxuu badanaa ka qaadaa $ 10,000 waxaas oo kale, laakiin wuxuu rabaa xoogaa ra'yi ah oo ku saabsan barnaamijka.)
In this webinar bilaash ah Bob shaqsi ahaan ayuu ku bari doonaa:
Si loo dejiyo ujeeddooyinka "saxda ah" ee saddexda qaybood ee ugu muhiimsan ganacsigaaga.
Qiyaasaha ganacsiga ee ugu muhiimsan ee awood kuu siinaya inaad ku guuleysato ujeedooyinkaaga.
Sida loo qiimeeyo waxtarkaaga hogaamineed ee shaqsiyeed. Ma haysaa waxa ay u baahan tahay si aad ugu hoggaamiso ururkaaga inuu gaaro faa'iido aan caadi ahayn?
Mar labaad, kaliya booqo goobta si fiiri tababarka fiidiyowga. Kadib markaad daawato tababarka hubi inaad gasho liiska mudnaanta Bob si laguu wargaliyo markii barnaamijkan horumarineed la helo. Taasi waa intaas, waxaan rajeynayaa inaad ka heshay tababarka!
PS: Fiidiyowga hoostiisa waxaad kala soo bixi kartaa xoogaa gunno ah oo aad qaas u ah kana faalloon kartaa tababarka.
Tags: raadinta ololaha falanqayntaraadinta sawiradaBuugaagta Suuqgeyntabarnaamijka tafaariiqda mobilada
Wax ka-hagaajinta Mawduucaaga caalamiga ah
Kordhi wax soo saarka emaylka qaab khad la'aan ah